कोरोनाका बिरामीलाई उत्तर कोरियामा गो’ली हानी ह’त्या ! – Khabarhouse
कोरोनाका बिरामीलाई उत्तर कोरियामा गो’ली हानी ह’त्या !
Khabar house | १७ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०४:४१ | Comments
प्योङयाङ: चीनको छिमेकी मुलुक उत्तर कोरिया कोरोना भाइरसबाट बच्न उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। उत्तर कोरियाली अधिकारीहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि सं’क्रमित नभेटिएको दा’वी गरेका छन् । तर केही सञ्चार माध्यमले चीन निकट विज्ञको हवाला दिँदै उत्तर कोरियामा एक सं’क्रमित भेटिएको बताएका छन् ।
तर तिनलाई गो’ली हानी ह’त्या गरेको बताइएको छ । उत्तर कोरियाली अधिकारीहरुले भने एक सय ४१ जनामा सं’क्रमण परीक्षण गरेको तर कसैमा पनि सं’क्रमण नभेटिएको बताउँदै आएका छन् । उत्तर कोरियाले पछिल्लो समय चीनसँगको सीमा ब’न्द गर्नुका साथै उच्च सतर्कता अपनाएको छ ।
केही दक्षिण कोरियाली मिडियाले चीनसँग जोडिएका उत्तर कोरियाली सहरमा सं’क्रमित भेटिएको जनाएका थिए । दक्षिण कोरियाली पत्रिका कोसन इल्बोले सिनुइजु सहरमा दुई जना कोरोना भाइरसका बिरामी भेटिएको जनाएको थियो। उत्तर कोरियाले यस अघि नै कोरोना भाइरस रोकथामका लागि चीनसँगको ना’का ठप्प पारिसकेको छ । अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छ ।